Xog-xasaasiya:Askari nus doolar u dilay qof rayid ah | Qaran News
Xog-xasaasiya:Askari nus doolar u dilay qof rayid ah
Writen by Qaran News | 11:58 am 19th Feb, 2020
Askari nus doolar u dilay qof rayid ah
Warbaahinta maxalliga ee dalka Kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay aad u wax uga qortay nin kamid ah dadka mootada kaga shaqeysta magaalada Nairobi oo nin boolis ah uu toogasho ku dilay.
Ninka la dilay oo lagu magacaabo Daniel Mburu Wangari ayaa la sheegay in mootadiisa uu kusoo qaaday ilma yar oo ku haftay biyaha webi mara duleedka Nairobi iyo hooyadii dhashay canuga, waxaana uu usoo qaaday isbitaal, si loola tacaallo xaaladda canugaas.
Ninkii mootada waday ayaa markii uu yimid isbitaalka Mama Lucy waxaa uu qeybta degdeg geeyay canugii yaraa ee uu soo qaaday, waxaana loo oggolaaday in uu gudaha u galo, balse waxaa loo diiday in uu mootada gudaha la galo.
Sida ay dad goobjoogayaal u shegeen wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa Kenya, ciidan boolis ah oo ku sugnaa albaabka isbitaalka ayaa ninkii mootada waday waxay ka dalbadeen lacag dhan nus dollar, si mootadiisa loogu oggolaado inay gudaha gasho.
“Waxay ku yiraahdeen ma jiro qof loo oggol yahay in gudaha uu mooto ama baabuur dhigto, waxayna ka dalbadeen lacag 50 shilling ah (nus dollar ah), balse waxaa uu ku yiri ma hayo lacagtaas. Dadkii kale ayaa ku yiri bannaanka iska dhigo mootadaada, markiiba waxa uu damcay in uu bannaanka dhigto mootada, waxaana booliska uu ka dalbaday inay u oggolaadaan in uu mootada dhigto bannaanka isbitaalka,” ayuu yiri qof goobjooge ah oo la hadlay Daily Nation.
Mootadii uu watay ninka dhintay
Hase yeeshee booliska ayaa dalbaday in kahor inta uusan bixin uu bixiyo lacagtii laga dalbaday, waxaana taas ay keentay in gacan-qaad uu dhexmaro Daniel Mburu oo ah ninkii mootada waday iyo askarigii booliska ahaa, wuxuuna markii laga itaal roonaaday uu dalbaday cafis.
“I cafiya fadlan oo idayaa aan kaxeysto mootadeyda”, ayuu ku baryootamay.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sidoo kale warbaahinta Kenya u sheegay in ninkii waardiyaha ahaa uu u yeeray askar boolis ah, kuna yiri “ninkan si madax adag ayuu ila dhaqmayaa, wuxuuna isku dayayaa in uu xoog uga baxo dhismaha”.
Daily Nation oo soo xiganaya dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa halka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in mid kamid ah askartii booliska ee loo yeeray uu u tegay ninkii mootada lahaa oo waardiyihii uu ku hayo meel qol ah, wuxuna xabbad kaga dhuftay feeraha.
“Wuxuu arkay anigoo aad u walwalsan, wuxuuna ii soo qaaday canugeyga, wuxuuna na keenay isbitaalka. Markii aan nimid waxaa inoo yimid oo ina caawiyay dad kale oo gaaraya, balse gudaha nooma aysan raacin, markii an cunuga u geynay dhakhtarkana waxaa isagii lagu yiri bannaanka u bax”, ayay tiri Agnes Waheti oo ah hooyada dhashay wiilka isbitaalka la geeyay.
Hooyada dhashay canugii uu soo qaaday ninka dhintay
Hooyadan ayaa intaa raacisay in wiilkeeda uu ku dhacay webi isagoo la ciyaaraya caruur kale, waxayna tiri “waxaan daaqadda ka arkay ninkii ina keenay oo ay ku dhegan yihiin waardiyeyaasha”.
“Waxaan u soo baxay bannaanka, si aan u ogaado waxa dhacay, waxaana la kulmay ninkii o xabbad wadnaha lagag dhuftay, kadibna waxaa la geeyay isbitaalkii aan joognay, halkaas ayuuna ku naf baxay,” ayay raacisay.
Nin ay saaxiibo yihiin ninka dhintay ayaa la sheegay in uu dhulka ka qaaday fooqa xabbadii lagu dhuftay.
“Booliska waxay toogteen nin ay horay u dhibaateeyeen waardiyeyaasha, markaas gacanta lagu hayay”, ayuu yiri qofkale oo goobjoog ahaa marka ay wax dhacayeen.
Afhayeen u hadlay guddiga korjoogteynta hawlaha booliska Kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo IPOA ayaa sheegay in markiiba ay goobtaasi u direen koox katirsan guddigaas, si ay baaritaan u sameeyaan.
Buuq iyo rabshad ayaa ka billaabatay isbitaalka lagu toogtay ninka, kadib markii dhallinyaro careysan ay ku dibadbaxeen afaafka hore ee isbitaalka, iyagoona ku qeylinayay ereyo ay kamid yihiin “askariga dhiig cabka ah ayaan rabnaa”.